Right On Interactive Aha Onye Ndú na Ahịa akpaaka | Martech Zone
Right On Interactive Aha Onye Ndú na Ahịa akpaaka
Wenezdee, Jenụwarị 4, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Tupu ị gụọ nke a, m ga-egosiputa n'ụzọ zuru ezu na m bụ enyi na Troy Burk na Amol Dalvi na ụfọdụ ndị ọrụ ndị ọzọ na Right Na mmekọrịta (ROI). Na - anyị bụ mpako ịkpọsa na anyị ga na-arụ ọrụ na Right On mmekọrịta iji nye akụrụngwa ahịa posts ebe a na Martech! Ha na-a na eze a onye dị ka nke ụnyaahụ!
Yabụ kedu ihe dị mma na ụbọchị anyị ga-ekwupụta mmekọrịta, nke ahụ Chikọta ọka, ụlọ ọrụ na-eme nnyocha banyere ire ahịa, na-ebipụta nyocha nke ndị na-eweta akpaaka na-ere ahịa aha ha ziri ezi na mmekọrịta mmekọrịta onye ndú na oghere. Dị jụụ!
Si akụkọ: Ruo n'oge na-adịbeghị anya, ahịa akpaaka e lere anya n'ụzọ dị ukwuu dị ka ụzọ a na-akwadoghị iji meziwanye ahịa ahịa data. Site na ọnụ ọgụgụ, iche iche na ọkaibe nke ihe ngwọta metụtara ya na-agbawa, nke ahụ abụkwaghị ikpe. Ndị ụlọ ọrụ (ma B2B na B2C) na-enweta nsonaazụ sitere na mbelata ọnụ ahịa ahịa yana mmụba ka mma iji nwekwuo ego na uru.
Right Na mmekọrịta edu the pack in 3 edemede… ha kpọrọ a kacha mma ahịa akpaaka na-eweta maka:
Mfe nke igafe
Ọnụahịa zuru ezu
Nke a abụghị obere ọrụ… azụmahịa ha na-emegide ụfọdụ ndị Refeyim na ụlọ ọrụ ahụ, gụnyere ExactTarget, Marketo, Hubspot, Eloqua na ndi ozo!
ROI nwekwara ọkwa dị elu maka ha atụmatụ na arụmọrụ. Ebe m buputachara ụfọdụ atụmatụ ọhụrụ ha na - apụ apụ, enwere m ike ijisi gị ike na n'oge na - adịghị anya ha ga - anọ na kọlụm kachasị mma maka njirimara
Site na akụkọ ahụ: Ndị ọrụ na-ahụ patent-echere ROI Customer Lifecycle Map ka bụrụ ihe bara oke uru n'ihi na ọ na-ahụ anya ebe atụmanya ọ bụla na ndị ahịa bi na ndụ ndị ahịa dabere na profaịlụ ha na njikọ aka ha. A na-ahazi ikpo okwu ahụ iji nye njikwa data, nkewa, imewe mkpọsa, na ntinye akara. Na Q3 nke 2011, Right On weputara ozi nke aka ya, mbuputa, nkewa na oru nsochi.
Ekele Right On Interactive maka ịbụ onye akpọrọ dịka otu n'ime kacha mma ahịa akpaaka ndị na-enye ọrụ n'ebe ahụ! Ha bụ ụlọ ọrụ mara mma nwere ngwaahịa dị egwu.
Budata nyocha nke ndị na-enye ngwa ahịa azụmaahịa sitere na Gleanster. Ọ bụ ihe zuru oke na nkọwa niile ị chọrọ ime mkpebi ịzụta ihe na ngwa ahịa akpaaka gị.
Tags: omeeokwukpachaara anyachikọta ọkaokpokoroụlọ ọrụ na-ere ahịa ahịa ahịandị na-ere ahịa akpaakaahịa akpaaka ahịaAkuko akpaaka ahiaahịa akpaaka reviewsahịanri na mmekọrịta
Nnwale saịtị na-eduga na Obi Contọ
Ego ole ka SEO Na-efu?
Feb 20, 2012 na 7:25 PM
Daalụ maka ịlele nyocha anyị, Douglas.
Anyị na-anụ ụtọ blog gị ebe a na Gleanster kwa!
Onye na-eme nnyocha na Gleanster